SALVIA (SALVIA) OAKWOOD: BEERASHADA IYO DARYEELKA - KALA SOOCID IYADA OO LOO QAYBINAYO BAADIYAHA
Ugu Weyn Ee Kala soocid iyada oo loo qaybinayo baadiyaha
Salvia Dubravny, ama Salvia, waa geed qashin ah oo noqon kara geedka sanadlaha ah ama gaaban. Meelaha banaanbaxa ah waxaa badanaa laga helaa geedo daa'in ah.
Noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'sage' ayaa loo adeegsadaa naqshadda muuqaalka, waxay abuuraan qoraalo cajiib ah. Waxaa sidoo kale caan ah daawada dhaqanka iyo karinta. Wixii ujeedooyinkaas, soo qaado caleemaha geedka - ururiyey oo la qalajiyey qol mugdi ah.
Ma taqaanaa? Waxaa jira nooc ka mid ah magaca salvia dhirta laga soo qaado salvare ereyga, taas oo macnaheedu yahay "in la badbaadiyo."
Salvia oakwood waa la koray beeraha iyo kuleylka xagaaga, beeritaanka iyo daryeelidda warshadu maaha mid aad u adag. Waa lagama-maarmaan in la raaco talooyinka beerashada, ka dibna ma jiri doonto wax dhibaato ah.
Salvia oakwood: sharaxaad
Goobta canabka ah ee dhirtu waa dhir laacib ah oo ka mid ah qoyska Luminous. Waxay leedahay stem grass ah, caleemo lanceolate cidhiidhi ah. Ubaxyada dhirta waxaa lagu ururiyaa inflorescences fara badan oo leh midab buluug ama lilac ah.
Tilmaamaha dhirta lagu dubo:
dhererka - 35-90 cm;
hoose ee caleemaha hoose - 3.5-10 cm dheer iyo 1.5-3 cm ballaaran;
inflorescences waa sahlan, waxay leeyihiin 1-2 laba laanood oo ka soo jeeda qulqulka fooruska;
ubax waxaa lagu ururiyaa 4-6 gogo 'ubax ah ubaxyada ubaxyada, oo ku yaala asliga ah fogaan ah 1.5 cm;
miro sage - saddex xagalka globular nadiif madow miro.
Buunshaha si xoog leh ayaa loo jeexay, oo hoosta ah ee asliga ah waa geedo, oo weli ah warshad cows ah oo kor ku xusan. Sidaa darteed, xilliga qaboobaha, qaybta sare ee asliga ah ayaa xakameyn kara, laakiin waxay si dhakhso ah u soo kabaneysaa guga.
Halkee ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu beeray geedkii oakwood, doorasho booska geedka
Salvia oakwood waxay ku koraan dabeecada kaymaha, on hillsides. Laakiin waxaa kale oo suurtagal ah in ay u koraan sida geed lagu beeray. Si aad u ogaatid sida lagu koro beerta beerta, aqoonta ayaa loo baahan yahay oo ku saabsan bey'adda oo ay si ammaan ah u kobcin karto. Waa lagama maarmaan in la doorto goobta saxda ah ee dhirta iyo ciidda.
Sida loo doorto meel loogu talagalay
Si aad u korto buunshaha, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo beerayo warshad iyo meeshii la samayn karo. Sage oakwood wuxuu jecel yahay iftiin, sidaas darteed meel waa in la iftiimaa. Sidoo kale, goobta waa in si wanaagsan loo diiriyaa.
Haddii aad dooratid goobta saxda ah ee beerta loogu talagalay, waxay si fiican u qaadaysaa xididada isla markaana si deg deg ah u koraan dhulalka dhowr mitir oo laba jibbaaran. Marka laga beerto dhirta waa in maskaxda lagu hayaa in ay koreyso oo ay lagama maarmaan tahay in laga tago meel bannaan. Sida caadiga ah waa 50-60 cm geedka soo socda.
Waa maxay cawska ciidda uu doorbidayo?
Tan iyo markii uu dhirbeelka yahay asal ahaan geedka duurjoogta ah, ma laha shuruudo gaar ah oo carrada ah. Waxa kaliya ee muhiimka ah - waxaa muhiim ah in aysan jirin biyo dhulka ku dhow. Oo sidaas darteed koritaanka dhirta waa ku haboon ciidda beerta caadiga ah ama isku dar ah ciidda loogu talagalay dhirta gudaha. Marka laga beerto dhul furan, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo aagga ka hor xitaa dayrta iyo bacrimiya iyada oo humus, compost ama Bacriminta macdanta fosfooraska-potassium. Beeridda koritaanka laga bilaabo abuurka waxaa ugu fiican ee ciidda leh acidity caadiga ah - 5.5-6.5 pH.
Waa muhiim! On a carrada badan bacrin ah, sage horumariyo si fiican, ama halkii, ay afkoda iyo caleemaha si fiican u horumariyaan. Ubax waxay dhacdaa si aad ufiican - ubaxku wuxuu noqon doonaa mid yaryar iyo burooyinkuna si fiican uma furi doonaan.
Qodobbada lagu beerayo Dubravnogo
Faafinta salvia siyaabo kala duwan ayaa loo samayn karaa:
kala qaybinta baadiyaha;
Salvia oakwood waxaa badanaa la faafiyaa iyada oo loo marayo beerashada. Habkani waxaa lagu fulin karaa iyadoo si toos ah loogu beerayo dhul furan ama geedo sii kordhaya guriga. Sida marka la beeray dhulka furan, sage si tartiib ah u koraa iyo sababta oo ah ubaxyada this dambe, ka badan inta badan waa geedo hore u koray.
Sida loo koro warshad cusub - hab loo qaybiyo baadiyaha, si toos ah u beerista dhulka iyo sida loo beerayo geedo geedo ah - waxaad dooran kartaa adoo eegaya dhammaan hababka iyo helitaanka ugu habboon kiis gaar ah. Mid kastaaba wuxuu leeyahay sifooyinkiisa.
Xeerarka loogu talagalay koritaanka geedo geedo waaweyn
In dhirta abuur beeraha Dubravnogo for geedo soo saaray dhamaadka jiilaalka ama bishii Maarso. Beeridda dhul furan waxaa lagu fuliyaa dayrta ama gu'ga.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa habka abuurka ah ee dhalmada ee dhirta geedkii. Tani waxay sabab u tahay dhibaatooyin ka mid ah beerashada iyagoo qaybinaya baadiyaha. Daabacaadda abuurka ayaa suurtogal u ah dhamaan noocyada salvia.
Salvia oakwood waxaa badanaa lagu faafiyaa geedo, beerto ay geedo ka dhacdo bisha Febraayo-Maarso. Habkani waa midka ugu badan ee loo isticmaalo, maxaa yeelay marka si toos ah loogu beeray dhul furan, geedka ayaa si tartiib ah u koraa oo ubaxu soo daahay.
Wixii beerashada abuurka ah ee geedo waxay u baahan doonaan awood ay tahay in laga buuxiyo nafaqo, carrada iftiinka ah. Abuurka waxaa la dhigay on ciidda, wax yar la rusheeyey dhulka. Ka dib, in ciidda waa in la qoyan yahay iyo daboolay bireed.
Marka yar oo caleemaha Bloom, geedo dhali. Laga soo bilaabo muddada markii la beero geedo sage, - Tani waa bilowga guga, geedo waxay noqdaan kuwo xoog leh horay u soo horeysay xagaaga. Ka dib markii 2-2.5 bilood ka dib beeridda abuurka, geedo lagu beeray karaa dhul furan.
Ka hor inta beerto geedo ee dhulka u furan, waa la adkeyn karaa - laga bilaabo dhexe ee April si aad u qaadato dheryihii geedo wakhti gaaban wadada.
Waa muhiim! Geedo waa in ay helaan qadar ku filan qoyaan. Ujeedadaas awgeed, mid ayaa ka iibsan kartaa substrate leh hydrogranules geedka abuurka. Tani waxay kaa caawin doontaa in la hubiyo in qoyaan kasta ee seedling kasta waa labis.
Sida loo abuuro abuurka saxda ah ee dhulka
U beerashada si toos ah dhulka dhulka Salvia abuuray xilliga qaboobaha ama horraanta gu'ga. Waxaad abuuri kartaa miraha laga bilaabo Maarso ilaa Juun.
Sida loo beero sage dubravny si toos ah dhulka:
ciidda waa la diyaariyaa lana rusheeyaa ciid la dubay, ka dib markii miraha la dhigo dusha sare;
Abuurka la saaray waxaa lagu rusheeyaa ciid, qoyan iyo daboolay polyetylenka sare;
inta lagu jiro mudada koritaanka waxaad u baahan tahay inaad la socoto nuxurka qoyaanka ee substrate ah.
Muddada koritaanka xayawaanka lagu magacaabo - 17-23 maalmood heerkul ah 22-24 ° C. Ka dib marka caleemaha caleemaha soo baxaan oo muuqdaan, filimka waa in laga saaraa.
Qaylo-dha-marisiga dabka baadravnogo baadiyaha
Salvia oakwood waxay jajabi kartaa qaybta baadiyaha kaliya ee gobollada koonfureed. Waxaad samayn kartaa nidaamkan dhamaadka bisha Ogos. Dalag si tartiib ah u jajabiyey, qayb ka mid ah xididka. Qeybta la kala goyn karaa waxaa loo isticmaali karaa in lagu beero geed cusub oo lagu dhajiyo naqshad cusub.
Ma taqaanaa? Caleemaha Salvia waa la daadiyaa oo cabaa sida shaaha. Cabitaankani wuxuu faa'iido u yahay ka hortagga hargabka, iyo sidoo kale faa'iido leh inta lagu jiro qabowga.
Noocyada daryeelka ee maqaarka
Sage oakwood waxay u baahan tahay daryeel qaar. Dhab ahaantii, waa biyo waraabin iyo iftiin dhexdhexaad ah. Waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo qaboojiyaha iyo heerkulka qabowga. Sharciyadan waxay khuseeyaan daryeelka daryeelka ee guriga iyo berrinka bannaan.
Nooc kasta oo salvia ah uma dulqaadan karo qoyaan joogta ah ee ciidda, sidaas darteed waa inaadan ku dhaafin waraabinta. Dhirta yaryar waxay noqon doonaan miirista waxtar leh. Waxaad dhali kartaa dhirta uma baahnid waraabinta, kaliya haddii ubaxu noqdo mid jilicsan, waxay u adeegtaa calaamad u ah baahida loo qabo in la helo salvia.
Qaababka quudinta laan qoorta
Sanad walba guga, maqnaanshaha dhuxusha wuxuu u baahan yahay quudinta. Bacriminta Nitrogan waxay ku habboon yihiin tan. Later waxaad samayn kartaa Bacriminta Fosfat iyo potash. Dhamaadka xilliga, mulching faa'iido leh. Foornada beerta waa mid weyn tan.
Sida loo dhajiyo geedka
Marka koraan salvia sida daa'in ah, waxaa lagama maarmaan ah in ay ku foorarsadaan si ay u sameeyaan geedka, si ay u siiyaan qaabka la doonayo. Sidoo kale inta uu dhirta uusan ku korto barar afkoda, sida manjadu waxay kicisaa korodh weyn oo caleemo ah, duurka waxay noqdaan kuwo aad u fiican.
Ka dib markii ubaxa ugu weynaa uu dhammaado, waxaad u baahan tahay inaad gebi ahaanba iska gooyso kaynta Salvia. Xaaladdan, ubax kale ayaa imaan doona xagaaga dambe. Xanuunka daawada ayaa loo baahan yahay in la soo gaabiyo saddex meelood laba meel. Xaaladdan, dhirta waxay noqon doontaa iswada.
Cudurada iyo cayayaanka ee dhirta geedaha
Miro yar, ama salvia, dhul furan ayaa laga yaabaa in ay saameeyeen caleenta, caarada caarada, kansarka xididka. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo daryeelo warshadda oo ay u habayso diyaar garow haboon.
Ka mid ah cayayaanka oo saameynaya geedkii oakwood, waxay yihiin:
ballad ciid ah;
Jardiinooyinka, dagaal wanaagsan ayaa noqon doona daaweyn joogto ah daawooyinka lagu iibiyo dukaamo gaar ah. Meelaha waaweyn waxaa looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan sharciyada dalagga dalagga.
Salvia oakwood ma aha oo kaliya ubax qurux badan, laakiin sidoo kale warshad aad u faa'iido leh. Waa warshad malab wanaagsan iyo warshad waxtar leh oo daaweyn ah oo loogu talagalay burqanimada, stomatitis, cudurada beerka, caloosha iyo kuwa kale. Maaha mid adag in la koro, qof kastana wuxuu u heli karaa geedka daawada ee iyaga u gaar ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kala soocid iyada oo loo qaybinayo baadiyaha 2020